यस कारण बल्छ जुनकिरीको पुच्छरमा बत्ती ! जानीराखौं |
यस कारण बल्छ जुनकिरीको पुच्छरमा बत्ती ! जानीराखौं
२०७७, ८ जेष्ठ बिहीबार १४:५२ May 21, 2020 ताजा खबररोचक
एजेन्सी । जुनकिरी एउटा यस्तो अचम्मको किरा हो जसको आफ्नै शरीरमा बत्ती बल्ने गर्दछ । शरीरमा बल्ने बत्तीकै कारण स-साना बलबालिकाको बिचमा यो निकै लोकप्रिय रहेकाे छ । बेलुकाको समयमा पुच्छरतिरको भाग बत्ती जस्तै चम्किने भएको जुनकिरीको पनि आफ्नै प्रकारको रहस्य रहेको छ । आफ्नै छुट्टै प्रकारको विषेशता भएको यो अनौठो किरालाई लिएर संसारभरका वैज्ञानिक समेत चकित परेका छन् । यसका साथै वैज्ञानिकहरुले यस रहस्यको खोजी समेत गरिरहेका छन् ।
जुनकिरीले यस्तो प्रकाश किन उत्पन्न गर्छ भन्ने प्रश्न मनमा उठ्न सक्छ । यस बारेमा भने वैज्ञानिकहरुले आ-आफ्ना धारणहरु राखेका छन् । कसैले उनीहरु आफ्नो जोडी खोज्नका लागि यस्तो प्रकाश उत्पन्न हुने गर्छ भनेका छन् भने कसैले राती सिकार गर्ने चराहरुलाई तर्साउन त्यसो गर्ने गरेको कुरा अघि सारेका छन् । यस्तै, कसैले त यो केवल रसायनिक प्रक्रिया मात्र हो भन्ने धारणा राखेका छन् । विभिन्न अनुसन्धान पश्चात पनि जुनकिरीले किन बत्ती बाल्छ भन्ने कुराको ठोस कारण भने पत्ता लाग्न सकेको छैन ।